रवि लामिछाने र निकिता पौडेलबीच आज औपचारिक रुपमा विवाह हुँदै, बधाई दिनुहोस् ! « Onlinetvnepal.com
रवि लामिछाने र निकिता पौडेलबीच आज औपचारिक रुपमा विवाह हुँदै, बधाई दिनुहोस् !
Published : 17 May, 2019 4:33 pm
चर्चित संचारकर्मी रवि लामिछाने र निकिता पौडेलबीच शुक्रबार औपचारिक रुपमा विवाह हुँदैछ। रविले अलातली विवाह गरेको चार महिनापछि परम्परागत विवाह गर्न लागेका हुन्। पारिवारिक स्रोतका अनुसार रविले शुक्रबार नगर कोटको होटल मिष्टिक माउन्टेनमा परिवारका सदस्य र आफन्तको उपस्थितिमा विवाह गर्दैछन्। विवाहमा रविले परिवारका सदस्य र आफन्तलाई मात्र बोलाएका छन्। विवाहको कार्यक्रम गोप्य राखिएको छ।चर्चित संचारकर्मीसमेत रहेका रविले न्युज २४ कार्यक्रममा सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम निकै लोकप्रिय छ।